musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Sarudzo yeUNWTO yakangouraya chero hunhu hwakasara muUN System
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
UNWTO Executive Council yakawedzera mvumo kune UNWTO Secretary-General Zurab Zurab Pololikashvil kusvika kupera kwa2025. Iri izuva rinosuruvarisa, uye kwete kuongororwa kweanokodzera VaZurab kana zviitwa.
Nhasi uno 113th Executive Council yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) yasarudzazve Secretary-General wazvino Zurab Pololikashvili aine chikamu chakakura che76% kurwisa iye chete aripo iyeye Mai Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa anobva Bahrain.
Iyi sarudzo yeUNWTO yanga isiri yezvakanaka kana zvakaipa zvakaitwa, chiono, kana zviitwa nesangano rakabatanidzwa neUN nyika yekushanya iri kutsvaga kutungamira. Izvo zvaive pamusoro pehusimbe hwemunhu mumwe chete uye kuhwina sarudzo kunyangwe sei.
Kuwedzera kutuka nekukuvadza kune zvakatogumbura mamiriro, muMadrid, vese Mutungamiriri weSpain, Pedro Sánchez, naMambo Mambo Felipe VI vakaratidza kutsigira kwavo UNWTO nehutungamiriri hwayo. Gurukota rezvekunze kubva kuGeorgia rakatsigira kudya kwemanheru husiku husiku pamberi pesarudzo.
Zvinofanira kubvumirana nemunhu wese: UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili, aimbove Mumiriri weGeorgia kuSpain kuMadrid aive nyanzvi yekudyidzana muna 2017 uye yakavandudzwa zvakanyanya muna 2020.
Muna 2017, kusimbiswa kwake semunyori-General kwakapotsa kwakwikwidzwa pamberi peUNWTO General Assembly kuChengdu, China, nevaaikwikwidzana navo Dr. Walter Mzembi vanobva kuZimbabwe uye vakatsigira Muzvare Dho Young-shim vekuSouth Korea.
Chikonzero chakaita kuti Dr Mzembi vabvumire kubvisa zvavakapikisa yaive vimbiso yeUNWTO yekushandisazve maitiro ehurongwa hwesarudzo. Izvi zvakatsigirwa neese aimbova Secretary General, Dr. Taleb Rifai, uye neanouya Zurab Pololikashvili. Dr Mzembi vakavimbiswa kutungamira danho rakadai.
Izvi zvakazove chivimbiso chenhema chezvematongerwo enyika uye zvakakonzera kusimbiswa kwakanaka kweZurab mu2017.
Kushandisazve maitiro esarudzo haana kuzombozadzikiswa.
Kubvira 2020, iyo yekufamba uye yekushanya nyika yanga ichipfuura nemumatambudziko akaipisisa akamboitika nekuda kwe COVID-19.
Zurab yakwanisa kutora mukana wedambudziko iri, ichiwedzera maturusi ezvematongerwo enyika kuchengetedza kusarudzwazve kwake.
Iyo UNWTO iri kukanganisa sei chero United Nations inodaidzira sarudzo dzakachena, waive mubvunzo wakabvunzwa bhuku iri munaGunyana 13, 2020
Zurab yakadaidza musangano wemuviri wenhengo dzeGumi Nesere dzekanzuru munyika yake yekuGeorgia munaGunyana 112. Coronavirus yakaita kuti zviome kune chero nhengo yedare kuti iende.
Iyo nguva yakatarwa yekuunza ajenda zvinhu muGeorgia haina kunyatso bvumidza kuramba kwaavo vari kutora chikamu kukwikwidza kufambisa zuva remusangano we113th Council kusvika muna Ndira 18-19 panzvimbo yaMay. Icho chikonzero chaive chekuti chiitiko chiwirirane neFITUR, zvisinei, FITUR yakabviswa mazuva mashoma mushure meizvi.
Iyo nguva yakatarwa yekuunza ajenda zvinhu muGeorgia haina kubvumidza nhengo kuti dziuye neimwe nzira pakaziviswa kuti vatsva vanokwikwidza vaifanira kunyoresa kufarira kwavo kukwikwidza neZurab mukati memavhiki matanhatu. Izvi zvaive zvinopfuura gore pamberi petemu yekuti mumiriri akadaro aite. Mazhinji nhengo dzeUNWTO nhengo dzenyika dzakabatwa nekushamisika kana vanogona kunge vasina kana kuziva. Nyaya yekutsikirira munyika dzenhengo yaive paCOVID uye kwete pane vavhoterwa.
Vanomwe vakasarudzwa vakanyoreswa zvakadaro, asi mumwe chete mukwikwidzi kubva kuBahrain ndiye akabvumidzwa kupinda. Secretariat yeUNWTO iri pasi peZurab yakaramba zvikumbiro zvitanhatu. Hazvizivikanwe kuti sei uye ndiani akanyorera.
Mukwikwidzi chete aikwikwidza kurwisa Zurab aive asina nguva yekuita mushandirapamwe. Kurambidzwa kwekufamba nekuda kwe COVID kwakaita kuti mushandirapamwe usakwanise.
Zurab yakashandisa mari yeUNWTO kufamba nyika asi yakangotarisana nenhengo dzeExecutive Council. Nyika idzi dzinopa chete 20% yenyika dzese dziri nhengo asi dzakapihwa Zurab mumakore maviri apfuura, nepo 2% yenyika dzenhengo dzisina kupihwa kana kutarisirwa kushoma.
Spain yaive yakavharirwa, dutu remuchando rakaremadza guta mazuva maviri chete musangano we Executive Council usati waitwa, zvikaita kuti vashumiri vazhinji vakwanise kuenda kuSpain.
UNWTO yakasimbirira pamusangano wenyama kuMadrid uye yaisatendera sarudzo chaiyo kana musangano.
Seminiti yekupedzisira, -maawa makumi mana nemasere, Gurukota rezvekunze reGeorgia rakabvumidzwa kutora nguva yemabiko nguva yesarudzo sarudzo dzisati dzakokwa senzira yeUNWTO ajenda. Hakuna nyika ingade kupokana negurukota rezvekunze panguva iyoyo uyo aiuya kuzoona mumiriri wake achikunda.
Sezvo makurukota aisakwanisa kufamba zviri nyore, mamishinari muMadrid akavhotera nyika dzavo.
Hazvizivikanwe kuti mangani makurukota ezvekushanya akauya, mangani akamiririrwa nemamishinari avo, uye kuti mangani evhoti emumiriri akaverengerwa muchiitiko nezuro. Zvisinei zviri pachena kuti inove mashoma nyika dzakasarudza nyika zana nemakumi mashanu nenomwe kuti ndiani achatungamira kushanya kuburikidza nedambudziko hombe rakambosangana neindasitiri.
Vaviri vekare veUNWTO Secretary General, mumwe aimbova Assistant Secretary General, uye mumwe aimbova Executive Director weUNWTO vakakumbira kururamisira musarudzo, zvisinei, izvi zvakawira panzeve neZurab.
Kuburikidza neWorld Tourism Network (WTN), a Kuzvibata muUNWTO Sarudzo Campaign yakatanga, uye mazana enhengo dzeWTN dzinomiririra maindasitiri ekufamba nyanzvi kubva kunyika 125 dzakaziviswa. Wese munhu arikupindura akatsigira chikumbiro chekuti UNWTO irongezve musangano weKanzuru yeKumisikidza, kubvumidza vamwe vakwikwidzi kukwikwidza, uye kuchengetedza kurongeka kwemushandirapamwe. Chikumbiro ichi chakasainwawo naDr.Walter Mzembi avo vakapiwa basa naZurab naTaleb muna2018 kuti vadzokorore mitemo yesarudzo.
Chikumbiro ichi chinokumbira kururamisira uye nehunhu mukuita kwesarudzo chakazotumirwa email, fakisi, uye / kana kuendeswa kune makumi matatu nenomwe nhengo dzeUNWTO Executive Council nyika yeKisimusi isati yasvika. Mamiriri ese eUS akashumirwa. Nyika imwe chete yakatumira kubvuma.
Chikumbiro chacho chakaendeswawo nemaoko kuUnited Headquarters muNew York.
Sarudzo iyi yaisangova isina kururama chete, asi yaityorwa JIU Ethic Mitemo uye haifanire kubvumidzwa nesangano rinouya re24th reUNWTO General Assembly kuMorocco mumashure megore rino.
9 vakavhotera Bahrain. Hazvisi pachena kuti mangani emakumi maviri nematanhatu Executive Council nyika dzinovhotera Zurab dzakanyatsovhota zvakananga kana kuburikidza nemumiriri. Kana paine munhu akatariswa panguva iyo Zurab yaive muhofisi, aya ndiwo Executive Council nyika. Nyika idzi dzaive neushamwari kuZurab.
Vamiriri vashoma vaipinda kuMadrid nezuro vakapofomadzwa nekutarisisa kwavakagashirwa nemurume mumwe chete, vachikanganwa basa ravo rekuvhota zvakare kune dzimwe nyika zana nemakumi mashanu nenomwe dziri chikamu chesangano repasi rose reUnited Nations.
Juergen Steinmetz, muvambi weWorld Tourism Network, akati: “Sarudzo yanga isiri yekuti Zurab anokwanisa sei kana kuti haana kukodzera. Izvo zvaive zvisiri zvekuita kwake uye kwake kwaakatarisirwa kuita mune ramangwana. Yakanga iri pamusoro pokururamisira uye tsika.
"UNWTO ingatarisira sei nyika dzakaita seUnited States kana UK kujoina, ichiziva nzira inobvumidzwa nesangano iri kushanda?"
"Iri rimwe zuva rinosuruvarisa kuWorld Tourism.
'Gloria Guevara anobva kuWorld Travel and Tourism Council anga achiedza kubudirira kuunza zvikamu zvakavanzika pamwe neruzhinji. WTTC yaingobvumidzwa kutaura kwemaminetsi matatu nezve basa revanozvimirira mudambudziko iri. Iyo World Tourism Network yakagadzirira kushanda neWTTC.
Kwandiri, Gloria ndiye gamba rechokwadi mune zvekuti mumwe mukadzi akasimba uye timu yake ine ruzivo vangapindura sei kune izvi zvisati zvamboitika.
“Munguva yedambudziko, hakufanirwe kuve nenzvimbo yeudyire. Isu tangoona izvi muno muUS nesarudzo yemutungamiri wenyika.
"Ndichiri kufara kuti Zurab akataurawo 'kubatana' mumushandirapamwe wake, kusvika parizvino, haasati ambopindura kubva paakatanga basa muna 2018 kune chero chinhu kubva kuWTN kana eTurboNews. "
Vatsoropodzwa kunze kwemukana wakanaka wekukwikwidzana naZurab musarudzo yakakosha iyi Mai Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa vanobva Bahrain nenyasha vakorokotedza VaZurab.